ကဘူးလ်မြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ စစ်မက်ဒဏ်ခံစားနေသော အာဖဂန်ပြည်သူများအကြား ထိတ်လန့်တကြားဖြစ် - Xinhua News Agency
ကဘူးလ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော် ကဘူးလ်တွင် လူသေဆုံးမှုနှင့် နေအိမ်အဆောက်အဦများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သော်ငြားလည်း နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကဘူးလ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည် ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး စစ်မက်ဒဏ်ခံစားနေရသော အာဖဂန်ပြည်သူများအကြား ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရ ပေါက်ကွဲမှုသည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉:၄၀ နာရီက Darul Aman လမ်းပေါ်ရှိ ပန်းအိုးတစ်လုံးထဲတွင် ပေါက်ကွဲစေသောပစ္စည်း ပေါက်ကွဲသွားချိန်က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူမရှိကြောင်း သိရသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာအား နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ သေဆုံးသူတော့မရှိပါဘူး” ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Qari Sayed Khosti က ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မျက်မြင်သက်သေများအပြင် ဒေသတွင်းမီဒီယာ Ariana News ၏ ပြောကြားချက်အရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အပါအဝင် လူ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာအား နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ဒီနေ့မနက်က ကျွန်တော်လမ်းဖြတ်ကူးနေတုန်းမှာ ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲမှုက ကျွန်တော့်ကို ထိတ်လန့်သွားစေတယ်။ ကျွန်တော့် ထရပ်ကားလည်း ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး အလုပ်သမား ၃ ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်။ အဲဒီထဲက ၂ ယောက်က ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်” ဟု ထရပ်ကားမောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ Rahimullah က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
“စစ်ပွဲပြီးသွားပေမဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုင်မှုတွေနဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေတာက ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကို ကြောက်ရွံ့စေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ တာဝန်ယူပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပေ။ နိုဝင်ဘာလက ကဘူးလ်မြို့ရှိ စစ်ဆေးရုံအား ပစ်မှတ်ထားကာ လူ ၁၅ ဦးသေဆုံး၍ ၃၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများစွာ၌ ပါဝင်ခဲ့သော အိုင်အက်စ် (IS) မိတ်ဖက်စစ်သွေးကြွများကလည်း မှတ်ချက်ပြုထားခြင်းမရှိပေ။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ပေါက်ကွဲမှုသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပေါက်ကွဲမှုများစွာ၏ နောက်ဆုံးပေါက်ကွဲမှုလည်း ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ် ကြာသပတေးနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်) က ကဘူးလ်မြို့ရှိ လူသွားလူလာများချိန်တွင် အရပ်သားကားတစ်စီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတွင်မူ ကလေးငယ် ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တက်ခ်ခါပြည်နယ် မြို့တော် Taluqan ပြင်ပ၌ နောက်ထပ်မတော်တဆမှုကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုအချို့ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကဘူးလ်မြို့ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင်း နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး အရပ်သား ၁ ဦး သေဆုံးပြီး အခြားသူ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် လူသွားလူလာများသော လမ်းမပေါ်ရှိ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး အရပ်သား ၁ ဦး သေဆုံးကာ အခြားသူ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အာဖဂန်ပြည်သူတွေက စစ်ဘေးဒဏ်ကို ကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အစစ်ဆေးမရှိဘူးဆိုရင် အခုကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ ရရှိထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ယုံကြည်ချက်တွေက ပြိုကျပျက်စီးသွားမှာပဲ” ဟု နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က ကဘူးလ်မြို့ ပေါက်ကွဲမှုအား မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အမည်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန် ငြင်းဆိုထားသော မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-12-01 09:57:23|Editor: huaxia
KABUL, Dec. 1 (Xinhua) — Peace in Kabul the capital of Afghanistan was once again disrupted byablast on Tuesday despite no losses of life and property so far reported according to authorities, causing panic among the war-weary Afghan people.
“We Afghans have fed up of war, our faith to the peace and security we enjoy nowadays will collapse if such terror attacks go unchecked,” an eyewitness to Tuesday’s blast in Kabul, who refused to give name and take photo, said to Xinhua reporters.■
1- Photo taken on Nov. 30, 2021 shows the site ofablast in Kabul, capital of Afghanistan. (Photo by Aria/Xinhua)
2- Photo taken on Nov. 30, 2021 shows the site ofablast in Kabul, capital of Afghanistan. (Photo by Aria/Xinhua)
3- The site of an explosion is seen in Kabul, Afghanistan, Nov. 17, 2021. (Photo by Kabir/Xinhua)